HDPE tuuboyinka qodid Floater - Shiinaha Ningbo Sunplast tuuboyinka
HDPE floater waarididda biibiile, by qalab polyetylen cufnaanta dhexdhexaad ah lagu sameeyo dabacsanaan u fiican, ka buuxsamay xoog sare xumbo polyurethane, walax UV-caddeyn leh qaab aad u fiican, sabaynta sare, installtion fudud. Nala soo xiriir si xor ah haddii aad xiisaynayso HDPE floaters waarididda biibiile our !!
floater biibiile HDPE waxaa laga sameeyey qalab polyetylen cufnaanta dhexdhexaad ah oo leh dabacsanaan u wanaagsan, xoog sare xumbo polyurethane gudaha ka buuxsamay. Iyada oo qaab-dhismeedka macquul ah iyo waxqabadka wanaagsan, floater biibiile noqdo bedelay ku haboon ee floater ee steel dhaqanka ee tuubooyinka waarididda sabayn.
No. Qaab dhismeedka Name waxyaabaha
1 caaga Shell MDPE
2 Buuxi In Waxyaabaha Xiran-cell xumbo polyurethane
3 handarraabbadeedii Steel steel carbon galvanized ama 304 ahama
※ qolof The dibadda waxaa doorsoon wax MDPE iyo qalleyf si wanaagsan, iska caabin divulsion & caabin lama filaan ah in la hubiyaa karo.
Walax UV-caddayn ※ waxaa lagu darayaa in peucine ah si ay u difaacaan rasaasta ka dhaawaca ah isbedel deegaanka iyo heerkulka hooseeyo.
Iyada oo qiimaha sare ee sabaynta ※, jidhka sabayn si fiican u qabata markii ay hirarku, dabaysha ama shaqo-joojin ka maraakiibta wajahay.
Meydadka ※ MDPE waa iftiinka iyo si ku haboon si loo soo dajiyo & transfer.settlement saldhigga, awoodda qabsiga waa mid aad u xoog badan, qaab aseismic wanaagsan.
※ Jirka sabayn waa deegaan saaxiibtinimo iyo dib loo isticmaali karo.
(mm) Floater awgiis Dia.
(mm) Floater awgiis Shell oo dhumucdiisuna
(kgs / Labo Xidig)
Tacliiq: caddaymaha ee liiska ku jira waxa aan moldings ee hadda. Caddaymaha Custom-dhigay waxaa laga heli karaa
Previous: Butt SPH160 Haydarooliga Fusion Alxanka Machine
Next: PP haysa Sddle
qodid oo Floater
Qodid oo tuuboyinka sabeyn
Qodid oo tuuboyinka Floater
HDPE tuuboyinka Floater
Biibiile qodid Floater